Ra'iisul Wasaarihii Hore Ee Israel Oo Xabsi La dhigay
Ehud Olmert ayaa waxaa lagu helay dambi ah inuu qaatay laaluush, islmarkaana is-hortaag ku sameeyey caddaaladda.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Israel Ehud Olmert ayaa waxaa maanta oo isniin ah (2/15/2016) u billowday 19 bilood oo xabsi ah, sababo la xiriira laaluush qaadasho iyo is-hortaag uu ku sameeyey caddaaladda.
Ka hor inta uusan 70 jirkaasi galin xabisga Maasiyuhu ee bartamaha Israel, ayaa waxa uu baahiyey Video uu ku sheegtay inuusan wax dambi ah gelin.
“Ra’iisul wasaare ahaan, waxaa mas’uuliyadda ugu weyn ay iga saarneyd ilaalinta dadka Israel. Maantana waxaan ahay kan xabsiga la dhigayo” ayuu yiri.
Ehud Olmert ayaa waxaa sanaddii 2014 lagu helay dambi ah inuu aqbalay kumanaan dollar oo laaluush ah, oo uu ku qaatay mashruuc dhismeyaal looga fulinayey magaalada Jerusalem, xilli uu ahaa duqa magaaladaas.
Maxkamad ayaa markii hore ku xukuntay Olmert lix sano oo xabsi ah, hase yeeshee maxkamadda sare ee Israel ayaa xukunkaas laaday, kuna soo yareysay xabsiga 18 bilood. Maxkamad hoose ayaa kadib ugu dartay bil dheeri ah, sababo la xiriir is-hortaag uu ku sameeyey caddaaladda.
Abaaro ka jira Deegaano ka Tirsan Somaliland
Turkish Airways oo Muqdisho ka Degtay
Wicitaanka: Maxamed C. Cabdi (Martello)
DFS oo loo Gudbiyay Qodobo Dastuurka Laga Baddalay